Public Health Concern कोभिड-१९ बिरुद्दका खोपको सम्पूर्ण जानकारी( खोप, प्रकार, प्रयोग, मात्रा लगायत) सम्पूर्ण बिवरण समेटिएको / – Public Health Concern
सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको
तपाईंले खोप किन लगाउनु पर्छ?
COVID-19 खोप लगाउँदा:
COVID-19 बाट बिरामी हुने जोखिम कम हुन्छ
यदि तपाईंलाई COVID-19 लागेको खण्डमा तपाईं धेरै बिरामी हुनबाट जोगाउँछ
आफ्ना साथीहरू, परिवार र समुदायलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ ।
यदि अधिकांश व्यक्तिहरूले खोप लगाएको खण्डमा भाइरस सजिलै फैलन सक्दैन । यसले गर्दा खोप लगाउन नसक्ने मानिसहरूलाई पनि सुरक्षित राख्छ ।
जेन्ससेन खोप सम्बन्धि जानकारी :
जोन्सनको ‘जेन्सेन एडी२६.सिओभी.२’ एक मात्रा लगाए पुग्ने खोप हो । यो खोपलाई पहिलो पटक गत फेब्रुअरीमा अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले आपत्कालीन उपयोगका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
यो खोप १८ वर्षभन्दा माथि सबै उमेरका व्यक्तिलाई लगाउन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
जेन्सेन खोप ०.५ एमएलको पाँच मात्रा भएको भाइलमा आउँछ । डब्लूएचओको नीतिअन्तर्गत एउटा भाइलबाट एक मात्रा खोप तानिसकेपछि त्यो भाइललाई २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६ घण्टासम्म मात्र राख्नुपर्छ । ६ घण्टापछि उपयोग गर्न मिल्दैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको यो खोपबारे जारी अन्तरिम गाइडलाइनअनुसार यो खोपको ०.५ एमएल इन्ट्रामस्कुलरको रूपमा डल्टोइड मांसपेशीमा दिइन्छ । हालसम्म यो खोपको एउटै मात्रा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अतिरिक्त मात्राको आवश्यकता र समयबारे क्लिनिकल ट्रायलअन्तर्गत अध्ययन जारी छ । जोन्सनको विज्ञप्तिअनुसार यो खोपलाई माइनस २० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा दुई वर्षसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ भने २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा बढीमा ३ महिनासम्म राख्न सकिन्छ ।
यो खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा वितरण गरिएपछि पुनः निम्न तापक्रममा राख्न मिल्दैन । गम्भीर एलर्जीको समस्या भएका व्यक्तिले यो खोप लगाउनु हुँदैन ।
विज्ञहरूका अनुसार पलिसार्बेटबाट एलर्जी भएकाहरूले अस्ट्राजेनेका वा जेन्सेनको खोप लगाउनु हुँदैन । पलिसार्वेट औषधि र मेकअपजस्तो उत्पादनमा पाइने सामान्य घटक हो । यो खोप गम्भीर र अस्पताल भर्ना भएका बिरामीमा ८५.४ प्रतिशत प्रभावकारी छ ।
खोप लगाएको २८ दिनपछि मध्यम र गम्भीर संक्रमणविरुद्ध ६६.९ प्रतिशत प्रभावकारिता देखिएको छ ।
हेरौ स्वास्थ्य सेवा बिभागको परिपत्र :
कोभ्याक्स के हो?
एक्सेस टु कोभिड-१९ टुल्स (एक्ट) एक्सेलेरेटर कोभिड-१९ को परीक्षण, उपचार र खोपको विकास, उत्पादन र समतामूलक पहुँचलाई गति दिने विश्वव्यापी सहकार्य हो । कोभ्यास, एक्ट एक्सेलेरेटरको खोपसम्वन्धी खम्बाले कोभिड-१९ खोपहरूको विकास र निर्माणलाई गति दिने र विश्वका सबै देशहरूमा स्वच्छ र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्दछ ।
कोभ्याक्स फसिलिटीको भूमिका सबैभन्दा उपयुक्त खोप उत्पादनको पहिचान गर्नका लागि निरन्तर कोभिड-१९ खोपको विकासलाई नियाल्नु हो । यो फसिलिटीले उत्पादकहरूसँग उनीहरूको खोपले नियमन निकायको स्विकृति पाउनुअघि उत्पादन विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहन दिनका लागि काम गर्दछ ।
खोप निर्माताहरूले खोप स्विकृति प्राप्त नगर्दासम्म हुने ठूलो लगानीको जोखिन लिन नचाहने भएकाले यस्तो गरिएको हो । तर अहिलेको महामारीमा, खोपहरूले अनुमति प्राप्त गरेपछि ढिलाई र खोपको अभाव हुन सक्ने भएकाले पनि यसो गरिएको हो ।
एष्ट्राजेनिका सम्बन्धि (AstraZeneca) जानकारी :
कोरोना भाईरस बिरुद्दको खोप सम्बन्धि बारम्बार सोधिने प्रश्न र तिनका उत्तरहरु :
(श्रोत : युनिसेफ नेपाल )
तपाईंले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू
अबदेखि ४० बर्ष वा माथि उमेर पुगेका सबै जनाले आफ्नो COVID-19 खोप लिन सक्छन् ।
केहि ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका मानिसहरू पनि खोप लगाउन योग्य छन्:
आफ्नो पेशाको कारण COVID-19 लाग्ने अधिक जोखिममा रहेका कर्मचारीहरू, जस्तै स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरू, वृद्ध र अशक्तता हेरचाह सेवाका कर्मचारीहरू, आपतकालीन सेवा, होटल क्वारेन्टिन कर्मचारीहरू, विमानस्थल र बन्दरगाहामा काम गर्ने कर्मचारीहरू
COVID-19 लागेमा निकै धेरै बिरामी हुने सम्भावना भएका मानिसहरू जस्तै हुन्छ अशक्तता वा स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरू
COVID-19 लाग्न सक्ने निकै जोखिममा रहेका मानिसरूसँग बस्ने, काम गर्ने वा हेरचाह गर्ने मानिसहरू जस्तै अशक्त व्यक्तिका हेरचाहकर्ताहरू, होटल क्वारेन्टाइन र सीमा सुरक्षामा काम गर्ने कामदारहरूसँग बस्ने मानिसहरू
खोप लगाउन योग्य मानिसहरूको पूर्ण सूची कसले खोप लगाउन पाउँछ (Who can get vaccinated)हेर्नुहोस् ।
६० बर्ष वा माथिका व्यक्तिहरूलाई AstraZeneca खोप लगाईनेछ ।
६० बर्ष भन्दा कम उमेरका मानिसहरूलाई Pfizer खोप दिइनेछ ।
COVID-19 खोप सबैको लागि निःशुल्क हो । तपाईंलाई मेडिकेयर कार्ड आवश्यक पर्दैन ।
खोप लगाउनु स्वैच्छिक हो । तपाईं खोप लगाउने छनौट गर्न सक्नुहुन्छ ।
COVID-19 खोपको असर प्रभावकारी बनाउन यो खोप दुई पटक (सुई) लगाउनु पर्दछ ।
जब तपाईंले पहिलो सुई लगाउनु हुन्छ त्यही बेला तपाईंले दोस्रो पटकको सुई कहिले लगाउने भनेर तपाईंलाई जानकारी दिईनेछ ।
अष्ट्रेलियामा खोपहरू प्रयोग गर्नको लागि स्वीकृति दिनु अघि सबै खोपहरू सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्न सावधानीपूर्वक परीक्षण गरिन्छ ।
यदि तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा वा COVID-19 खोप लगाउने बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् ।
Source : https://www.coronavirus.vic.gov.au/covid-19-vaccine-nepali
प्रिफाईजर भ्याक्सिन सम्बन्धि बिशेष जानकारी :
खोपका प्रभावकारीता कसको कति ?
विश्वव्यापी रुपमा लाखौं मानिस खोप लिन थालेसँगै खोपले हामीलाई कसरी सुरक्षित राख्छ भन्ने बारे हामी अझ राम्ररी बुझ्दैछौं । तल उपलब्ध जानकारी हालसालै गरिएको अनुसन्धानमा आधारित छ जसमा COVID-19 खोप लगाईसकेका धेरै समुदायका मानिसहरू संलग्न छन् ।
AstraZeneca खोपले COVID-19 लाग्नबाट तपाईंलाई जोगाउँछ ।
यो खोप १२ हप्ताको अन्तरमा दुई पटक (मात्रा) लगाउँदा तपाईं COVID-19 बाट बिरामी नहुने सम्भावना ९० प्रतिशतले बढ्छ ।
यो खोपको पहिलो सुई लगाउँदा तपाईं COVID-19 को कारण अस्पतालमा भर्ना हुनु नपर्ने सम्भावना ९० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ ।
Pfizer खोपले COVID-19 लाग्नबाट तपाईंलाई जोगाउँछ ।
यो खोप २१ दिनको अन्तरमा दुई पटक (मात्रा) लगाउँदा तपाईं COVID-19 बाट बिरामी नहुने सम्भावना ९५ प्रतिशतले बढ्छ ।
यो खोपको पहिलो सुई लगाउँदा तपाईं COVID-19 को कारण अस्पतालमा भर्ना हुनु नपर्ने सम्भावना ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ ।
तपाईको खोप लगाउन जाँदा तपाईले के के ल्याउनु पर्छ
तपाईं खोप केन्द्रमा हुँदा नाकमुख छोप्ने मास्क लगाउन आवश्यक छ ।
फोटो सहितको परिचयपत्र, यदि तपाईंको छ भने
मेडिकेयर कार्ड, यदि तपाईंको एक छ भने (यद्यपि मेडिकेयर कार्ड आवश्यक छैन)
तपाईंको Individual Healthcare Identifier नम्बर
यदि तपाई आफ्नो पेशाको कारणले COVID-19 खोप लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको रोजगारदाताबाट जारी गरेको कर्मचारी परिचयपत्र वा पत्र
तपाईको एलर्जी जस्ता चिकित्सा ईतिहासको बारेमा जानकारी ।